TSY MAINTSY MANDRESY ISIKA HOY NY FILOHA RAVALOMANANA – MyDago.com aime Madagascar
Niditra mivantana tamin’ny antso an-tariby teny amin’ny Place de l’amitié Amboanjobe androany tolankandro ny filoha Ravalomanana Marc nandritra ny fihaonana fifampiarahabana teo amin’ireo mpomba azy. Toy izao raha fintinina fohifohy ny lahateniny teny an-toerana. Miarahaba antsika rehetra hoy izy nahatratra ny taona vaovao. Faly dia faly aho fa eti Amboanjobeno miarahaba anareo tratry ny taona. Misaotra ny mpikarakara hoy ny filoha Ravalomanana Marc nanomana izao fihaonana fifampiarabana izao. Miarahaba anareo mpitarika rehetra Tim, Mfm,ary ny antoko tarihin’I Satrobory. Mbola averiko indray hoy izy fa fotoana lehibe afahako mampita hafatra aminareo izao. Ity taona ity dia hitondra fahasalamana sy fankaherezana ho antsika mianakavy ny taona 2013. Samia hoy ny filoha Ravalomanana Marc isika mieritrerita sy mandinika tsara mba hivoantsika amin’izao krizy niaina efataona izao.Fotoana hitondrantsika fampandrosoana eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena, izay tsy vitantsika ho azy ny asa. Mangataka amin’Andriamanitra isika hoy izy mba hanana fahasalamana. Ny Ankolafy Ravalomanana hoy izy dia vonona mandrakariva amin’ny fitandroana ny fandriampahalemana indrindra ny famerenena ny ara-dalàna. Tsy misy fampandrosoana hoy ny filoha Ravalomanana Marc raha tsy misy fitoniana sy fifamelana ary miresaka ny samy Malagasy. Manome toky anareo aho hoy izy fa afaka mampandroso tsara an’I Madagasikara ka ohatra amin’izany ny lafiny maha olona, ny fampianarana.Afaka maano izany isika hoy izy rehefa misy ny filaminana, ny fifamelana. Afaka miara miasa amin’ny firenena mantanjaka any ivelany isika ary tsy maintsy ataontsiika izay hivoahana amin’ny fahasahiranana mba hampandrosoana ny firenena fa mijaly ny vahoaka. Aza matahotra ianareo hoy izy fa tsy maintsy tonga I Dada. Aza taitaitra amin’ny fanenjehana sy fanaratsiana ary famendrofendroana ataon’ny sasany, fa matokia an’Andriamanitra. Mitana ny marina isika ary na oviana na oviana eo foana ny marina ary ny marina tsy mba maty. Ny hafatra tiako apetraka aminareo hoy ny filoha Ravalomanana Marc dia tsarovy ity teny ity hoe izay mitambatra vato fa izay misaraka fasika. Fotoana firaisankina sy hiomana tsara izao hoy izy izany dia manome toky anareoa ho ary ianareo manome toky ahy fa tsy maintsy mandresy isika.Ny vahoaka Malagasy hoy ny filoha Ravalomanana Marc dia mahalala izay olona hofiana hitondra azy. Ny vahoaka Malagasy dia manana fo Hendry. Tandremo tsara hoy izy ny teny tafahoatra mba tsy hisy teny hanafintohina ny hafa, teny hampahendrena, hampanajana indrindra ny Ankolafy Ravalomanana. Samia hoy ny filoha Ravalomanana Marc isika mihaino ny feon’ny fieritreretantsiaka. Tonga ny fotoana hiresahantsika firaisankina,fampandrosoana, fifankatiavana.Tonga ny fotoana hiresahana ny fiaraha miasa hanarenana ny firenena. Matokia ny Sadc, ny vondrona afrika, ny firenen-dehibe toy ny Usa, ny asiatika isika. Mankasitraka ny fanemorana ny datim-pifidianana isika Ankolafy Ravalomanana hoy ny filoha Ravalomanana Marc. Samia miomana tsara eo amin’ny lafiny ara-tsaina isika, ho tony tsara, fa aza manaiky ny ho rangitin’ny sasany, na famendrofendroana. Na di aeo azan y teny mafy aoka isika ho tony tsara. Hoy aminareo hoy ny filoha Ravalomanana Marc fa zavadehibe ny miandry antsika, noho izany dia tsy maintsy hamafisina ny firaisankinantsika. Mivory aty Maputo hoy izy ny Sadc Troika hijery akaiky ny raharahantsika. Tsy mamelà antsika irery ny Troika Sadc, ny firenena mikambana, fa miara miasa amintsika ary mahalala ny fahasahiranana ny vahoaka. Avelao any hoy izy ny adilahy politika fa fampandrosoana no tokony himasoana. Miezaka mafy isika amin’ny fampandrosoana ny firenena na dia latsaka amin’ny lalina aza noho ny adilahy politika. Vonona ny hanampy antsika ny iraisam-pirenena. Tandremo tsara hoy ny filoha Ravalomanana Marc ny teny anavona satria ny teny raha foy manan’elatra. Hoy aho hoy izy ny Ankolafy Ravalomanana hajao tsar any teny avoaka, Hajao ny teny omeko anareo, sy omen’ireo mpitarika. Tsy misy mihitsy hoy izy ny fanapahankevitra raisin’izy ireo raha tsytonga any I Dada. Tsy misy olona atolotra mihitsy any. Na dia eo azan y tsy fitoviankevitra dia manana tanjona kendrena isiak dia ny fampandrosoana sy fanarenana an’I Madagasikara. Aza taitaitra ianareo hoy ny filoha Ravalomanana Marc, hoe mangina aho . Ny fahanginana hoy izy dia matetika mitondra zavadehibe eo amin’ny filaminana; Ny fahanginana dia mampiseho fahendrena Aza matahotra hoy izy fa miezaka aho mitady izay hahasoa an’I Madagasikara, tsy mandry alina. Ho avy ny fotoana hoy ny filoha Ravalomanana Marc hilazako aminareo hoe amin’izao Dada no ho tonga. Manana fanantenana, ary ampisehoy fa isika samy Malagasy mahay miray hina. Na dia misy hevitra tsy mitovy aza dia tombontsoa lehibe antsika fifamelana. Tsymaintsy mifamela isika hoy izy raha misy diso. Matokia ianareo fa tsy hivadika na oviana na oviana amin’ny Malagasy aho ary ianareo tsy hivadika amiko. Alaviro ny faharatsiana, aoka hijery lavitra ny mahasoa ny vahoaka fa tsy tombontsoantsika. Manome toky anareo aho hoy ny filoha Ravalomanana Marc fa ho avy Dada hitondra firenena; Samy ho tratry ny taona mitsingeringerina indray isika.
MIVONONA ISIKA VAHOAKA FA TSY MAINTSY ISIKA NO HAMARANA NY KRIZY
Auteur Solo Razafy*Publié le 9 février 2013 9 février 2013 Catégories Politique
24 pensées sur “TSY MAINTSY MANDRESY ISIKA HOY NY FILOHA RAVALOMANANA”
NY FANTATRAY sy HIAINANAY: LE MONDE A L’ENVERS
Hatramin ny Fanonganam-panjakana ary nahatonga an ‘Ingahy Rajoelina teo amin’ ny fitondrana dia izao no fantatray ary iainanay:
– Lasa mahantra tanteraka ny vahoka malagasy , indrindra indrindra ireo mipetraka amin ny faritra iva.
– raha omaly izy dia nanantena TGV, Tanora Gasy Vonona, androany kosa dia nahita Tena Gasy Vendrana.
– Akory atao, na ny sakafo ho hanina aza tsy misy
– Misy tanora aza mahavita mihitsy manaporitra polisy satria zanaka HAT hono
– Ny maty maty ihany, maromaro ihany izay izy ireo, vaoatafika amin ny basy, ary basy avy any amin ny toby … kalaknikov e
– Ny tanana maloto BE, feno `maloto`tsy azo hafenina ny fofona …
– Feno HALATRA mihoam-papana ireo andrimasom-panjakana sy ministera isan-karazany
– Ny Diso indray no Maharesy any amin’ny fitsarana
Dia mbola sahy milaza ihany Ianao ry Ingahy Rajoelina fa tena tianao izahay aty amin ny faritra iva, tena tianao ny Malagasy … inona marina ny tianao hampinanina anay e Lazao fa tsy maninona fa efa fantatray isan’andro le teny , teny be resaka … resaka , resaka … efa ela ihany izay …
Mba miangavy anareo , tohizo ny lisitra ary ilaina ny milaza ny zava-misy …, fitiavan-tanindrazana izany.
Tiako Ianao ry Tanindrazako.
Izao izany ilay hoe olona 300 sisa mpomba an’i Dada!Ary nataon’ny tarika tsiakoraka tany ilay hira novetavetain’i Domelina tam izy nitokana nu coliseum iny!fa tsy tokony hatoritory ny mpitarika tolona,fa nampiseho retour en force iny fa mila affronter na am media sy am zavatra maro ireto foza ireto ,il faut enclencher la vitesse superieure là!
Ary mba efa nitsapa ny heriny ve ny Foza ?
Vahoaka tena IZY ireo fa tsy voavidy.Sa tsy izany ?
MISAOTRA ANAREO REHETRA TONGA TENY E!
izany ka vahoaka, vahoaka vonona hetsena an’i Dada daholo. ilay dj loham-poza efa mandavaka fotaka hisitrihina. ilay tgv orange efa nivadika mainty sy fotsy toy ny faty andrasana fandevenana.
Mitohy ny tolona fa kely sisa, ny rariny tsy maintsy mandresy.
Misaotra anareo vahoaka mbola misy saina sy hery ary tanjaka. tsy mila politikan’i mpivarotra akanga be loha kanefa tsy mahay mikaoty vola.
faly aho ary tena faly mahita ireto namako mbola vonona hatrany hatrany… mino aho fa na ireo voafitaka mora ka lasa foza noho ny ts fahalalàny hihaiky ka hanantona ny zanak’Dada satria aty @ Dada ihany no misy ny fanantenana!
Faniriana dit :
9 février 2013 à 19 h 53 min
Hatao matetika ny fihaonana tahaka izao mandra pahatonga an’i PRM
Nahafinaritra sady mihaona, no nahare vaovao avy aminy
9 février 2013 à 21 h 28 min
Mazava dada a!!ho ela velona dia tongava soa amantsara HITONDRA ny tany
sy ny Fanjakana, leo fofom-poza sy laingam-poza, ala-poza,vava-poza tsy musy hilana azy izahay.
10 février 2013 à 6 h 35 min
ANDRIAMANIYTA TSY MIJERY FOTSINY IREO VAHOAKANY MAROBE IREO FA HO AVY NY ANDRO IRAY IZAY TSY MAINTSY HO TANTERAHANY ARAKY NY LALANY
10 février 2013 à 8 h 13 min
Tena taitra ary gaga izaho nahita anireto vahoaka teny Amboanjobe.Hay vé mbola tiany ny olona ihany ny prezidà RAVALOMANANA é.Mangataka any i Rajoelina izaho mba hijery tsara anireto sary ireto.Porofo izao fa maminy ny vahaoka prezida RAVALOMANANA, tsy nokaramaina ireo fa tonga an-tsitsapo tamim-pitiavana.Dia hisaorana be dia be isika rehetra tonga teto Amboanjobe.Maromaroa ny haotrizao.Mangataka antsika rehetra mba hihaino anity hira ity.
Arosoko Amintsika ity antso nataoko ny 26 janvier teo !
NY VAHOAKA NO HO VAVOLOMBELONA ( TEMOIN) SY HO MPITSARA NY ADY MADIO HIFANDONAN’IREO MPANOM-PANJAKANA AMIN’NY CANDIDAT ANDRIAMATOA RAVALOMANANA MARC AMIN’NY FIFIDIANANA HANENDREN’NY VAHOAKA IZAY HO FILOHAN’NY FIRENENA..
Nataon’ny mpanongam-panjakana sy ireo mpanohana azy daholo ny paika sy tetika atramn’ny kajy nifofoana ny ain ‘ny filohan’ny Firenena (17/18 novembre 2006 teny Ivato) aza..,mba hanakanana ny Filohan’ny Firenena tsy handray anjara amin’ity ady lehibe ity dia ny fifidianana hanehon’ ny Malagay ny safidiny ,mba hanondroan’ny Malagasy izay heveriny fa mendrika sy hahefa ny Fitondrana ny Firenena sy hiara-hisahana amin’ny Malagasy ny Fanarenana sy Fampandrosoana ny Firenena ary ny Fampivoarana aingana sy manaraka ny fenitra , sy lasitra tena izy ,tena ilaina eo amin’ny ara-tsaina , ara-pahendrena ,ara-tsaosialy ,ara-politique , ara-batana ny Malagasy Rehetra…mba hafahan’ny Malagasy manentsina ny efa-taona very..,!
— Tena ady ho amin’ny hampanjakana ny rariny sy ny hitsiny ary ny ara-dalàna hifehy ny fiainan ‘ ny Firenena , mba hitondra ny Fahamarinana sy ny Fahamasinanaa sy Fifanajana ary Fifankatiavana / Fihavananaeo amin’ny Fiaraha-monin ‘ny Malagasy Rehetra !
Ny an-daniny sy ny an-kilana dia tsy mirongo basy na tafondro na gaz lacrymogène fa ny tanam-polony fotsiny ihany….!Ady madio , mazava ,ary hanazava tsara izay hevitry ny Malagasy mikasika ny tarehiny sy ny toetran’ ny Fitondrana mifanentana amin’ny fahendrena malagasy : ny Fanahy no maha olona ary ny Malagasy Bemiray Tsivakivolo ary tsy misy avo na iva fa toa ny molo-bilany iray mihodidina mitandro ny Fahamarinana sy manaja ny Teny nifampierana sy nifanomezana !
—Adin’olona afaka sy tan-dalàna ary tsy mijery afa-tsy ny tombotsoa ambony no lovan’ny ny Malagasy Tsivakivolo ary manome toky fa hiaro ny Fiandrianam-pirenena , firenena tsy hamidy na hatakalo na inona na inona !
ANDRIAMANITRA ANIE HOMBA ANTSIKA
10 février 2013 à 10 h 12 min
L’oncle SAM a mis sérieusement en garde DOMELINA :
Les Etats-Unis frappent en premier et annoncent, ouvertement, sur son compte tweeter qu’ils préviennent Andry Rajoelina et ses sbires de ne pas compromettre le processus électoral en cours tel que cela a été décidé par les autorités électorales indépendantes incarnées essentiellement par la CENIT.
Hisaorana betsaka ireo vahoaka tonga namaly ny antso. Aoka isika tsy ho diso lalana fa mbnola tsy mivaha ny krizy. I Dada mantsy nilaza hoe » aza manao teny mahatezitra ny hafa. Raha ny samy ao @ zanak’i dada dia azoko tsara izany fa raha @ foza dia mba gaga kely aho aho, i Dada dia manao tsara fanahy @ olona ratsy fanahy izay tsy mitsitsy mihitsy. Izay anefa aloha ny hafatry ny sefa dia arahaina satria izy irery ihany no tena mpitarika to-teny.
Ireo tonga t@ sabotsy dia mbola hampahany ihany fa rehefa tonga eny Ivato i Dada dia mbola avy telo na efatr’eny ary mety hihoatra azy. Ka io no tena homanantsika rehetra fa raha betsaka ny olona dia mianjera ho azy ny EMMOREG.
10 février 2013 à 12 h 06 min
Hoy ilay olona iray izay : « On ne traite pas un sujet majeur, avec des méthodes sentimentales » !
Marina ny anao ry LAZALAZAO ! Niandry ny réactions-nareo rehetra aho, ka izao no mba hevitro : Ny zavatra niseho omaly dia porofo mazava fa mbola miandry mafy ny Filoha Ravalomanana ny vahoaka malagasy, ary anjaran’ireo mpitarika no mamakafaka sy mandinika an’izay zavatra niseho rehetra !
Marina fa tsy fotoanan’ny fiantsina ady izao, kanefa ny fahavalo kosa dia aoka apetraka amin’ny toerany izay tokony mendrik’azy, dia ny maha favalom-pirenena azy !
Tolona lavitr’ezaka no miandry ny vahoaka malagasy, ary izany dia tsy ny fiverenan’ny Filoha Ravalomanana ihany, fa ny fanarenana an’io Firenena io dia mbola asa goavana miandry antsika rehetra ! Eo no ilaina izany tena hoe firaisan-kina izany !
Rehefa mazava ary fantatry ny vahoaka ny tanjona sy ny toeran-kaleha, ho mora aminy kokoa ny « hanaraka an’ireo mpitarika » !!
Ny fandeferana diso tafahoatra, tsy MIADY !!! Tsy mbola nisy olona nanoron-trano, raha tsy efa voadio tsara ny toerana ! Eny, fa na ireo lazaina fa « sauvage » any anaty ala aza, dia mahafantatra an’izany !
10 février 2013 à 17 h 48 min
Mamay mandrakizay Ravalomangana, sady tsy mahazo mody, efa taona izay, tsy mahazo milatsaka, mbola tazonin’ny justice Sud Af ny passeport-ny. De inona foana no antenain’ireto. Raha mbola eo foana woa Zandry, tsisy mangirana ny an-dRaosy, fa areti-po isan’andro lava. Henjana ny anay iny ka. Tsy laitran-dRaosy sy ny taranany.
@rabe,nareo zao no mangovitra mahita an’ireny vahoaka be ireny!raha tena mahasahy avelao ny olona hidina an dalam be fa aza asiana alika mivovo mandefa lacry!eo isika mahita izy!!!!efa lasa miteniteny foana eny am tvm sisa domelina fa mafy be anga ilay voadaka avy any am zay rehetra naleha?ny équipe eto am tanàna efa miha misintaka daolo,ny tena efa tsy asian’izan’iza hajany intsony
Nitsangana t@ maty Rabe marina!
Ningaingainy tany indray izy izany!!hitsikitsika tsy mandihy foana fa ao raha.
Dada tsy maintsy ho avy na faly Rabe na tsy faly, rehefa tonga ilay fotoana
voatondron’Andriamanitra ho @’izany satria olony iny.
mankasitraka ny vahoka tonga tany amboanjobe.
raha nadinika ny vavan´i radomelina tamin´ny TVplus aho, dia tena manahy mafy fa hanangana korontana sy adim-poko i rajoelina sy ny Frantsaya, hanakorontana zareo dia hamao vono moka ny malagasy mitolona indray, tahaka ny efa niseho t@ ireo zanatany frantsay sasany taloha,
Tsy hanaiky ny fiverenana´i Dada izy ary tsy hanaiky ihany koa izay filoham-pirenena ho lany eo i rajoelina. Dia hampiseo ny loham-botony inadry izy, dia ny frantsay koa manaraka eny ihany.
Soa anefa fa mizarazara ny foza izao, ary efa maro ireo miaramila manamboninahitra tsy mankasitraka intsony izao fitondrana jadona sy halatra izao
11 février 2013 à 2 h 25 min
Maika ny fanerenana ny Firenena sy ny fanatsarana ny farim-piainan’ny Malagasy !
« TAOM-PANDRESENA ITY TAONA ITY ,HOY NY FILOHA RAVALOMANANA MARC »
Miavaka amin’ireo resaka nentiny Tamintsika ity resaka narosony ho Antsika tamin’ny asabotsy 09 janvier teo iny
Mazava dia mazava ny tenin’ny Filoha RAVALOMANANA MARC izay vonona ary tena maika hiasa,izay efa lasa lavitra eo amin’ny fijerena ny fanerenana ny Firenena, eo amin’ireo vinavina tsy maintsy hatao mba hiverenan’i Madagasikara aingana eo amin’ny laharana sahaza azy.., eo fanabezany tsy atomboka dia eny izao..
Tsapa tsara ny valin-tenin’ny Filoha ho an’ireo mihevitra fa tsy maharaka ny seho-javatra eto amin’ny Firenena ny Filoha …Tsy mifandany ny Fikoha ary amin’izy moa no ifandany ny Filoha ? Voninahitra antsobika tsy atao am-patam-bary !..fa tenin’olon-kendry no ambarany.. .
Noteneniny ny toeran’ny fanabeazana , ny fahasalamana…ho an’ny Rehetra.eo amin’ ny fanerenana ny Firenena.Mandrisika Antsika izy mba hiezaka mba hafahantsika mampandroso aingana ny Firenena..
Manome toky Antsika izy mikasika ireo Vondrom-pirenena (EU, UA , SADC, ireo Fikambam-pirenena (ONU ) ary Firenena lehibe (USA, Chine ..) izay manampy Antsika ary miaraka Amintsika..
Koa , hoy izy , tandremo ny teny miavona , ny teny tsy ambina sao manimba ny fifandraisantska amin’ny Firenen-kafa..Isika dia mifandray amin’ny Firenena Rehetra..ary ilaina izany eo amin’ny fampandrosoana ny Firenentsika
Ary hoy izy koa hoe : » Mandra-pihaona tsy ho ela ! »
Tany MAPUTO izy no niresaka tamintsika..Mikarakara ny fodian’ny Filoha mianakavy ny TROIKA / SADC any MAPOTO , hoy Maître Hanitra ttamin’ anjara -pitenenany !
Miraisa hina.!. Izay miray vato , fa izay misaraka fasika !
Azontsika tsara ny votoatin’ny resaka nataon’ny Filoha tamintsika dia ny fanerenana aingana ny Firenena ary ny fanamaivanana maika ny fahorian’ny Malagasy.Tsikaritra amin’ny resany fa maika hody izy mba hanantanterahana aingana izay zava-kinendriny izany..ary …Isika koa tokony ,hoy izy ,hanomboka izany fanarenana izany !
Koa aoka Isika hanana fanantenana , fankaherezana ary finoana satria Andriamanitra tsy mamela Antsika irery..!
Isika tokony tsy hamaly intsony ireny fandrangitana ataon-drajoely , ataon’i golblatt , ataon’ireo olona milza fa pro-Ravalo nefa resa-poko no entin’izy ireo..TSY EKENA IZANY ,FA IZANY NO FIASAN ‘NY MPANJANAKA SY NY ANDEVONY..!
Hendry ny Malagasy ary pofon’izany ny fahatoniana , ny fahaizany nifehy ny hatezerany nandritry izay efa-taona izay..Nahay nandray ny hafatry ny Filoha Isika ary tsy nety nahodikondin’ireo lian’ady ,ireo nitady nampizara ny Ankolafy RAVALOMANANA MARC ka nandrisika Antsika hidrikina eny an-dalam-be….
Ity no teny mafonja nataon’ny Filoha RAVALOMANANA MARC ;
« TSY MISY FANAMPAHAN -KEVITRA RAHA TSY TONGA ANY ANTANINDRAZANA AHO ! »
Mahavaly ireo mpanao tombatombana be fahatany ! Hampangina ireo mitady ny fialan’ny Filoha koa izany..
Iny resaka iny dia manala ny ahiahy nitsimoka tao amin’ny sasany fa indrindra dia » filazana mazava ny zava-misy sy miseho marina « -mise au point – ary koa setrin’ireo lainga sy famafana ireo atsanga tsy aman’orana ,ary koa fanehoana fa mbola maharaka sy manaraka ny fiainana politique izy..
Saingy mangina izy
Hoy izy : ny fahanginana dia zva-dehibe satria manery hieritreritra , handinika ny zava-misy ary manamora ny fitadiavana hala-olana…ny mangina volamena..
Raha afohezina ny resaky ny Filoha dia tokony ho matotra Isika ka hibanjina ny ho avy dia :
–ny fanerenana aingana ny Firenena
— ny fanatsarana maika ny farim-piainan’ny Malagasy..!
Mahereza minoa fa mitohy ny Tolona…!
Ny fahamaroan’ny olona dia porofo azo tsapain-tanana fa tsy matory akory ny Malagasy..
Mahabe fanantenanasy maome hery izao hetsiky ny Malagasy izao , koa marina ny kiakin’ny filoha manaoo hoe :
« HANDRESY ISIKA ! »
Aza matahotra ianareo izay tonga teny an-toerana fa izahay tsy mba afaka nandeha tany dia maro ihany koa no mbola miandry ilay fotoana efa fantatsika. Izahay mino fa tsy ny am-pahafolon’ny miandry io fotoana io akory no tonga teny amin’ny place de l’amitié. Hiaraha-mahalala ny embouteillage, ny fahalaviran’ny toerana. Tsy ianareo irery hoy izahay satria angamba amin’ny manaraka dia any amin’ny toerana malalaka sady afaka andehanan’ny rehetra no hifamoriantsika zanak’i Dada indray. Ny tolona tsy maintsy ifandimbiasana. Efa teo izahay nefa mbola ho eo indray. Ny olona mpijery rugby ve dia heverin’ise fa mpanohana an’ise avokoa. Sanatria. Izahay tia Rugby fa ny hevitray ary ihany. Merci ho anareo izay afaka e!
Misaotra antsika rehetra tonga teny amboanjobe e! hita fa mbola ao tsara ny fitiavana ny filoha Ravalomanana, tsy misy hatahorana raha misy fifidianana fa na dia mangala-bato aza ny foza dia azo haseho fa be ny pomban-dRavalomanana , fa ny tiana ho resahina dia izao , inona no tokony hataontsika mba hatonga ireny hery ireny hivadika ho vokatra fa lasa be tsy ahoana isika mianakavy ka hadihizan’ny foza ny tanana dieny mbola misy ny hery tokony hitady vaha-olana isika eny na dia fanomezantanana ny samy mpitolona aza fa tena mafy ny fiainana, ny an-dRajoelina mantsy dia ady lavitra ezaka no ataony , atao izay havizana antsika mianakavy , atao izay hampahantra antsika mianakavy , atao izay habeharetina eto amin’ny tanana, ny sakafo miditra tsy fihinana , ny fanafody tsy misy izany no tolona ataon-dRajoelina entina hamonoana antsika mianakavy , ka izay no mahatonga ahy miteny hoe tokony isika hitady hevitra e! aza adino ny mivavaka fa io no tena mampahery sy manova zavatra , ary tena marina ny tenin’ny filoha ireny , tena olon-kendry e! fa mba henoy ny an-dRajoelina tao amin’ny TVplus , bandy amin’ny Tanana
Tsy woe akory hors sujet ity zavatra lazaiko fa vaovao tena lehibe.Nametra-pialà ny pape Benoit XVI. Marina mihitsy ny azy.Aiza no misy anizany pretra ianao nefa ny zavatra ataonao mifanohitra aminy fivavahana, ao koa ny vehivavy samy vehivavy toy izany koa ny lehilahy izay samy mifanambady.
Ny frantsay anie ry Misajoana no mampiantra ny loham-botony @ fampiasany any domelina, voavidy efa ela mba hanongana ny filohantsika e!
Ka na somary lazainao ho mivona aza ny resakao ry Rasamy dia efa tsara topazan maso ihany dieny izao: raha mbola tsy hiala @ frantsay foana ihany ramalagasy dia tsy ho ela dia ho tereny frantsay handany ny lalàna momba ny « mariage pour tous » sy ny tohiny….Eo izany…
FA ny fanairana ny be sy ny maro hanohina tanteraka ny filoha M.Ravalomanana @ fomba fisainana sy fiasa toy ny nataony fa tsy araky ny sainy francophones loatra: io ny olana be tsy maintsy vahana aingana. Aza avela ho irery intsony re izy ô!
Nahoana ny Filoha RAVALOMANANA MARC no manizingizina sy mitaky ny firaisan-kina , no manosika hitambatra toa ny vato fa tsy hisaraka toa ny fasika ,na hanao toa ny foza maro ao anaty harona.?
Niverimberina io fiantsoana hiray hina io !Toa ny misy ahiahiny momba ny firaisana ,ny fiarahana ,ny maha -iray ireo mpanohana azy ..!
Fomba fiteny sy fniriana izany !
Misy ireo hetsik’ireo milaza ho pro-Ravalo ! Iza izy ireo ,ary teny amin’ilay fihaonana ve izy ireo ?
Ary hono hoy aho :tsy ita tsy heno i Zafilahy sy Manoela ,izay tsy nitsitsy ny fotoanan izy ireo rehefa iteny eny amin’ny Magro , ary tsy nitsahatra nanambara fa nifampiresaka amin’ny Filoha foana izy ireo Tsy misy maharatsy izany..Misy ireo miresaka amin’ny Filoha matetika fa tsy misehoseho amin’izany.
Fa nahoana no tsy niaraka tamin’ny Rehetra teny amin’ny fihaonana tamin’ny asabotsy 9 janivier teo !
Nisy sampona nahazo azy ireo ve , Narary ve , Nidongy ve , Nisitaka ve , Tezitra ve fa nahoana ?
Mila fanazavana tsotra sy ny tena marina !
Précédent Article précédent : ME RAZAFIMANATSOA HANITRA : ANY AMIN’NY FILOHA RAVALOMANANA MARC NY PASSEPORT- NY
Suivant Article suivant : La mafia du Bois de Rose